Netflix waxay mar kale kor u qaadday qiimayaasha, markan si dhaqso leh ayey u saamaynaysaa | Wararka Gadget
Netflix waxay mar kale kor u qaadeysaa qiimayaasha, markan si dhaqso leh ayey u saameyn doontaa
Shirkadda Waqooyiga Ameerika waxay u timid inay wax ka beddesho habka aan u isticmaalno filimada, taxanaha iyo dokumenteriyada. Waxay na siisay wax soo saar aad u wanaagsan sida Waxyaabaha Qariibka ah, Irishman ama Ciyaarta Squid, si kastaba ha ahaatee, waayadan dambe waxay doorteen kor u kaca qiimaha oo ay adag tahay in la fahmo adeegsadayaasha badankood.
Kordhinta qiimaha cusub ee Netflix waxay saamayn doontaa Yurub oo dhan iyada oo ku dhawaad ​​kor u kac 12% ah, waxayna isla markiiba noqon doontaa, saamayn doonta saamiga bisha ee hadda. Sidan, Netflix waxay umuuqataa inay filayso bilaabida HBO Max si loo yareeyo duullimaadka suurtagalka ah ee adeegsadayaasha intii suurtagal ah.
Calaamaddu waxay u muuqataa inay ku dhisan tahay korodh laba-sannadood ah, taas oo ah, labadii sannadoodba mar inta lagu jiro taariikhahaan waxay doortaan inay sameeyaan qiimo-korodh aan u muuqan inay dhammaad leeyihiin. Waxay bilaabmaysaa, dabcan, inay ka dhigto ilkaha isticmaaleyaasha, gaar ahaan kuwii markii hore bixiyay wax ka yar laba iyo toban euro oo loogu talagalay rukunka Premium oo u oggolaanaya afar isticmaale inay ku raaxeystaan ​​waxyaabaha 4K Dolby Atmos isku mar. Sidan, sicirka kaliya ee aan lug ku lahayn boodka waa midka aasaasiga ah, kaas oo fuliya qaraarrada ka hooseeya HD qaraarka (tayada DVD) oo kaliya u oggolaanaya hal isticmaale isla waqti isku mid ah. Kuwani waa qiimayaasha cusub:
Qiimee Aasaasi ah > HD la'aan iyo adeegsade> 7,99 euro (qiimaha ayaa hadhay)
Qiimee Estándar > Iyada oo leh HD iyo laba isticmaale> waxay ka socotaa 11,99 euro ilaa 12,99 euro bishii
Qiimee Premium > Iyada oo leh 4K iyo afar isticmaale> Ka tag 15,99 ilaa 17,99 euro bishii
Xaqiiqdu waxay tahay in adeegsadayaashu og yihiin in Netflix's 4K HDR uu aad uga fog yahay 4K run ah iyo dhibaatooyinka daawashada qaraarada aan waxtarka lahayn ayaa aad iyo aad loo dareemi jiray ilaa hal sano. Si kastaba ha noqotee, ka fog xallinta dhibaatooyinkan, Netflix waxay go'aansataa inay kordhiso qiimaheeda mar labaad, ma waxay leedahay wax la xiriira bilowga HBO Max? Laga bilaabo Oktoobar 18 -keeda soo socota, adeegsadayaashu waxay ku bixin doonaan lacagta heerka cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Noticias » Netflix waxay mar kale kor u qaadeysaa qiimayaasha, markan si dhaqso leh ayey u saameyn doontaa
Xiaomi Mi TV Soundbar soundbar dhawaaqa
ANNKE NC400, kamaradda ilaalada ee aad u baahan tahay